မရောက်တာကြာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မရောက်တာကြာ
Posted by ကူမားရ် on Feb 18, 2011 in News | 23 comments
နိုဝင်ဘာ လ ကတည်း က အလုပ် များနေလို. ရွာထဲ ကို ပြေးဝင် ပြေးထွက်နဲ. ကော်လည်း မမန်းနိုင် ဘယ်သူ.မှလည်း နုတ် မဆက် နိုင် နဲ. ဖြစ်နေတာ အခုမှ သူကြီး ရဲ. အသစ် ပြင် ထားတဲ.စည်းကမ်းတွေ ပြန် ဖတ်မိပြီး ၆လ အတွင်း ဘာ မလုပ်၇င် ညာမလုပ်ရင် ၇ွာ ထဲက အထုတ်ခံ၇မှာ စိုး လို. အတင်း ဖြစ် ညှစ်ပြီး ရေး လိုက်၇တယ်။ ကိုယ်တိုင် က ရေးစရာ ဘာမှ မရှိ တော. သူများရေးတဲ. သတင်းတွေ ဖတ်၊ဓါတ်ပုံ တွေ ကြည်.နဲ. ဘာသတင်းမှ မသိရတော. လောက်အောင် ဝေးနေခဲ.တာ။ ရီစရာ မောစရာ တွေ၊တရားတော် ဆွေးနွေး တာတွေ၊ဖိုက် တင် အငြင်းအခုန် အုံးဒိုင်း ဖုန်းခွပ်တွေ၊ဆူးနဲ.မဝေ ပျောက် သွားတာ၊ပိစိကွေး စိတ်ကောက် တာ၊မနော နာမည် ပြောင်း တာ၊ အာဖျံကွီး ရွာပတ်တာ၊ကိုပေါက် ဆေးလိပ် ဖြတ်တာ၊ကို ကြောင် ကြီး သတ်သတ်လွတ် စားတာ၊ကိုအောင်ပု အ၇က်မူးတာ၊ကိုခိုင် ဘုန်းဘုန်း ကို စာချတာ၊ကိုနေ၀န်းနီ အလွမ်းနာကျ နေတာ တွေ လောက် ကလွဲပြီး ဘာ သတင်းမှကိုမသိရဘူး။ကိုယ်.ရဲ.တစ်ခုတည်းသော ပိုစ်. လေးနဲ.တော်ကြာ ရွာ ပြင်ထွက် ရမှာ ကြောက်လို. အခုပေါက် ကရတွေ ၀င်ရေးလိုင်တယ် ပွိုင်.အဖြတ် မခံရအောင် သူတော် ကောင်း များ ကော်မန်. ပေးကြပါနော်။
(မေ.နေလို.) ကိုယ်ပိုင် သန်.ရှင်းစွာ ရရှိသောလုပ်အားခ ဖြင်.စင်ကပူနိုင်ငံဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကထိန်ဖြစ်မြောက်ရေး မတည် အလှူ၊ မန်ချက်စတာ မဟာစည် ကျောင်း ကထိန် သင်ကန်း ၊ကျောင်းအသစ်ဆောက်ရန် မြေကွက် နှင်. လုပ်အား အလှူ တို.မှရရှိ သော ကုသိုလ် တို.အား မန်းတလေး ဂဇက် ရွာသူရွာသား ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ အားလုံးတို.ကို အမျှဝေ ပါတယ် အားလုံး ဖတ်ဖတ် သမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြ ပါ။( ယခင် ဆင်းရဲ သောကြောင်.တစ် ခါမျှ ယခုလောက် မလှူနိုင်ခဲ.ဘူးပါ)
သာဓု ကို အရင် လာခေါ်သွားပါတယ်။
ဆူး မပျောက်ပါဘူး ဆူး ရှိပါတယ် ခရီးသွားတာ တပတ်တည်းပါ။
ဒီတလော ခရီးသွားပိုစ်တွေ တင်တာ လူစိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာတာနဲ့ အပျင်းပြေ အပျော်လေးတွေ လျောက်ရေးပြီးတောင် တင်နေသေးတယ်။
သာဓုပါ အဘဆွေ ..
ကျွန်မလဲ မပျောက်ပါဘူး .. ရှိပါတယ် … ရွာထဲကိုလဲ နေ့တိုင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် … အလုပ်သိပ်မအားလို့ ပို့စ်မရေးဖြစ်တာပါ …
ဆူး နဲ. မဝေ နှစ် ယောက် လုံးကျေးဇူး နော်။မှတ်ဥာဏ်ကောင်း လိုက် ကြ တာ။၅လ လောက် မတွေ.တာ တောင်
တစ်ခါတည်း တန်းခေါ်တယ် (အဘဆွေတဲ.)။ ဆက် ရေးကြ ပါ အားပေးလျှက် ပါ။
ကျန်သေးတယ် အစက ကိုပေါက်နဲ့ကြောင်ကြီးအမျုိးတော်ဘို့လက်ဝါးရိုက်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြန်စဥ်းစားရတော့ မယ် ကြောင်ကြီးက ခုတလော တော်တော်လေးခြေများနေတယ် သတင်းရထားတယ်။
ကိုကြောင်ကြီး က အစကတည်း ကဟာ ကို လေးပေါက် ကလည်း၊ ခုတစ် လော ရေးတာလေးတွေ အရမ်း သဘောကျတယ် ၁၀ တန်း ဘ၀ ပြန်ရောက် သွား သလိုပဲ။ ဦးပုည ရဲ. လေးမောင်.စံကျောင်း ကဗျာလေး ရှိရင် တင် ပေးပါဦး၊ကျေးဇူးပါ၊
ကြောင်ကြီးက ခြေများတာ အိပ်မက်ထဲမှာပါ လေးပေါက်ကြီးရဲ့ စိတ်ချရပါတယ်။
အိပ်မက်ထဲမှာ ကြောင် မဟုတ်ဘဲ ခူ ဖြစ်သွားလို့ ခြေထောက် များများနဲ့ ဟိုအပင်ကူး ဒီ အပင်ကူး လုပ်မိရုံလေးပါ။ အိပ်မက်က နိုးတော့ ပုံမှန်ဘဲ။
ကိုအောင်ပုလဲ အရက်ပြတ်ပြီး ဘဒန္တဘွဲ့တောင် ရသွားပါပကောလား …
ပိစိကွေးကတော့ မင်းသမီးလုပ်မလို့ မျက်စိမျက်နှာအသားအရည်လှအောင် ပြင်ဆင်နေလေရဲ့ ..
မနောကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်းကြေငြာမိလို့ စောင့်ရှောက်ချင်သူတွေ ပေါနေတယ်တဲ့ ..
သဂျီးက သူ့အတွေးကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရေးပြပြီး မတူသောအတွေးကို ဖော်ထုတ်ပေးရင်း ရွာသူရွာသားတွေ စံနမူနာယူနိုင်အောင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ပေးနေတယ် ..
ကိုပေါက်က စာမရေးရ မနေနိုင်လို့ ပရိတ်သတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ နံမည်ကျော် ကိုပေါက် (မန်း) တောင်ဖြစ်နေပြီ ..
ဆူးကတော့ ပြည်ပအတွေ့အကြုံရအောင် မကြာခဏခရီးထွက်ပြီး သတင်းရယူပေးပေမယ့် ပို့စ်တစ်ခုကို ၈၀ ပဲ ရတဲ့အပြင် ကွန်မန့်လဲ သိပ်မရလို့ မရေးတင်တော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်ကောက်နေတယ် ..
မဝေကတော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေတယ် … ဓါတ်ပုံတွေတင်ရတာ အဆင်မပြေတော့တာနဲ့ သူများရေးတာတွေပဲ ၀င်ဖတ်နေတယ် …
ဘာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပါအုန်း …
ကဲကြည်. သိတဲ.တတ်တဲ. သူများရှင်းပြလိုက်တော.လည်း ၄၊၅ ကြောင်းနဲ.ရှင်းကနဲ သိ၇တော.တယ်။
ကျွန်တော် ကတော. ထုံးစံပေါ. မေ၀၇ယ် Christmas, new Year and valentine တွေဆုံ တဲ
Dec to Feb လေး လ က စားသောက် ဆိုင်တွေ အလုပ် အများဆုံး အချိန် ဆိုတော. ယားတာကိုထုံး တို.ပြီး အလုပ် ဆင်းနေရလို.ရွာထဲမေ၇ာက်ဖြစ်တာပါ။မဝေခရီးသွားတာ မသိဘူး နောက်မှ ပိုစ်.တွေဖတ်ကြည်.ပြီး ၇န်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး နေလို.မတတ်ဖြစ်နေတာ သိ၇တယ်။ နေသားကျအောင်တော.အတော် ကြိုးစားရမယ်နော်၊
မဝေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းပါစေ။
သာဓု သာဓု သာဓုပါ။ ရွာထဲကို နောက်ကျမှရောက်လို့ ခုမှသိပေမယ့် ရွာသူရွာသားအချင်းချင်းမို့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေပေါ့။
ကျေးဇူးပါ မမ ရယ်။ရေးတာတွေလည်း အားပေးနေတယ်နော်
သာဓု သာဓု သာဓု.
ရွာသူ၊ရွာသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးနောက်ပြောင်စည်းလုံးတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးထဲမှာ သိရတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ပိစိကွေးက အရမ်းခင်တယ်………. အဘဆွေရဲ့ အလှုအတွက်သာဓုခေါ်ပါတယ်နော်……….
ပိစိကွေး ရယ် မသိခင်သေးကတည်းက အဖိ(အကို)ရင်သွေးလေးဆိုပြီး ခင်နေတာပါ၊
နောက်ပြောင် နိုင် ပါတယ် စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူးး။
တလက်စထဲ ပြောချင်တာ ကြောင်တွေကို အဆင့်အတန်းမခွဲပါနဲ့လားဗျာ
ဆင်းရဲရဲ ချမ်းသာသာ စိတ်ထားတတ်ရင် လှူလို့ရပါတယ်။ ( ယခင် ဆင်းရဲ သောကြောင်.တစ် ခါမျှ ယခုလောက် မလှူနိုင်ခဲ.ဘူးပါ)
ကိုကြောင် စကားတော်တော် တတ်၊
ပြင်ရေးမယ် (ယခင်ဆင်းရဲ၍ မလှူနိုင်ခဲ.ပါ)
မနော နာမည်မပြောင်းပါဘူး။ မနောလည်း အလုပ်မအားတာနဲ့ ရွာထဲ ချောင်းပိတ်နေတာလို့ မလာဖြစ်တာပါ။
“စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရှာဖွေနေသူ” ဆိုတာကိုပြောတာ ..နေပါလိမ့်မယ်..။
ပြောရရင် .. ကိုယ်ယူဆာအမည်တွေ ..ရှည်ရှည်ကြီးအဓိပါယ်ဖေါ် မရေးစေချင်ပါဘူး..။
စာတပုဒ်တင်ရင် .. About the Author: ပါပြီးသားမို့ .. အဲဒီမှာ ကြိုက်သလောက် ..ကိုယ်အကြောင်းရေးနိုင်တာပဲနော..။
ယူဆာအမည်က .. ကိုယ့်ကလောင်နာမယ်ဖြစ်တာမို့ .. ကလောင်နာမယ်လှလှလေးရွေးတင်စေလိုပါတယ်..။ ကလောင်အမည် ( pen name)ရှိမှလည်း … စာရေးသူဖြစ်တာပါ..။
ဒါကို စည်းကမ်းထဲလည်း ထည့်ရေးထားပါတယ်လို့..။
မနောလည်း.. မနောဖြူဆိုတဲ့ အမည်လှလှရှိပြီးသားမို့ ..အဲဒါကို pen name လုပ်လိုက်ပါလို့..။
အခုလိုအမျှဝေရတဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့် ၀င်ငွေပိုကောင်းပြီးပိုလှူနိုင်ပါစေ၊
ဒါနဲ့ ဘာလို့ အဘဆွေ ဖြစ်တာလဲ စပ်စုပါရစေ။
အဘ ဆွေ ဘာလို့ ဖြစ်ရလဲ့ ဆိုတော့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဆွေမျိုးတွေ ဆိုတော့ ဆွေတာပေါ့ အန်တီ ပဒုမ္မာရဲ့.. ;)
ဟုတ်ဖူးလေဆူးရဲ့။ သူများတွေကျ ဦးကြောင် ။ဦးခိုင်၊ကိုပေါက် ဆိုပြီး သူ့ကျမှ အဘ ဖြစ်နေလို့၊
အော် အဘပု တော့တွေ့မိတယ်၊
ဖြစ်မှဖြစ် ရလေ ရွှေ ရွှေ ပဒုမာရယ်( ပြည်ကြီးမဏ္ဏိုင်မြကြီးလေသံဖြင်.)
မဝေ စခေါ်တာ နဲ.အားလုံး အဘဆွေဖစ်တွားကြတာ။
အမှန်တော. တား က ၄၀ တောင် မကြေ.တေးဘူး။
အဘဆွေ ဆိုတာ အသက်ကြီးလို့ပေါ့ အသက် အားဖြင့် ၅၀ကျော်ပြီ။
အသက် ၄၀ကျော်နဲ့ အဘနီ လို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ နေ၀န်းနီ ဆိုတာ တောင် ရှိသေးတယ်။
ဘကြီးပု ဆိုတာ ဆူး ခေါ်တာ.. အသက်အားဖြင့် သိပ်မကြီးသေးပါဘူး။
၈၈တုန်းက ၇တန်း လောက်ဘဲ ဆိုလား။
ကိုပေါက် မန်း ဆိုတာ ကလည်း အသက် ၅၀ကျော်ပြီးသားဘဲ ၆၀ ဘက်တောင် ယိမ်းနေပြီ။